pps12345 November 7, 2012 - 8:00 pm လူမည်းတွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အဖိနှိပ်ခံပါ။ လူမည်း သမ္မတ ဖြစ်တာ မြန်မာပြည်က အဖိနှိပ်ခံ တွေ အတွက်ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ အထူးအခွင့်အရေး တွေရခဲ့တဲ့ စစ်သားသားသမီးတွေက ပါဂုဏ်ယူနေတယ် ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ။ အာဏာရှင်ဟောင်း နေဝင်း အမေရိကန်ကို အားကိုးပြီး ပြည်သူကို နှိပ်စက် အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်ကို ချ ခဲ့တာတွေ ကို ပြည်သူက အော့ကြောလန်နေပါပြီ။ အမေရိကန် နှင့် တရုတ်ကို ရန်တိုက်ပေးပြီး မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ။ နေဝင်းလက်ထက် က ဗကပ ကို တရုတ်က လက်နက် တပ်ပေးခဲ့တာ နေဝင်း မကောင်းလို့ပါ။ ကို ကိုမမ စစ်သားဟောင်း သားသမီးများ ခင်ဗျား ပြည်ပအားကိုး တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ။ ခင်ဗျား တို့ ဖေဖေ(ခ) အဘ နေဝင်း နှင့် သန်းရွှေ ကြောင့် အဆုံးမသတ် နိုင်သေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို မြန်မြန် အဆုံးသတ်ပေးကြပါဗျာ။ ခင်ဗျား တို့ အဘတွေ မိုက်ကြွေးကို ပြန်ဆပ်ပေးကြပါ။
Reply baby sai November 7, 2012 - 8:49 pm သူတို့ကိုရောယုံရလို့လား အထူးသဖြင့် ခွန်ထွန်းဦးပေါ့
Reply Maung Lwin November 7, 2012 - 9:02 pm “Congratulation to Mr.Obama and Family, and Democratic People of US” and Very Well Come to visit to Burma, thank you Mr.President of US.
Reply mehmasah November 8, 2012 - 12:54 am You guy need to ask our MON political VIEW!
Reply swe htwe November 8, 2012 - 12:59 am Daw bauk jar ,I don’t agree to you. Obama is not an idiot. What are you thinking about?your idea is very dangerous. Please express your opinion.
Reply han han November 8, 2012 - 10:26 am Yes,,,,,That very very Happy & very very good for our country & our Myanmar
Replyူlady November 8, 2012 - 11:56 am Congratulation Obama..
Reply FOX November 8, 2012 - 1:47 pm ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသွားတာလေးကိုသဘောအရမ်းကျပါတယ်….ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်း၊ နိုင်ငံကိုပြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်…
Reply shwe November 8, 2012 - 4:19 pm Congratulation Mr Obama and his lovely family.I am very happy for he had been elected for the second term.I wish you can try your best for American as well as for my Motherland, Myanmar.We welcome you to visit our golden land.Thank you Mr President for you appreciate My mother’s dedication,Daw San Su Kyi.